Maneho Hevitra Amin’ny Fanavaozana Ady Amin’i Gaza ny Israeliana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Jolay 2014 2:27 GMT
Taorian'ny tifitra balafomanga avy any Gaza, nanaiky ny hanaovana bemidina antsoina hoe “Sisiny Fiarovana” ny (fahefana) mpanatanteraka Israeliana hanoherana ireo mpikatroka any Gaza tamin'ny 7 jolay. Ireo balafomanga natifitra avy any Gaza ireo dia setrin'ny hetsika lehibe fisamborana ireo Palestiniana ahiahiana ho mpikamban'ny Hamas manerana an'i Andafin'i Jordana ary tazonina ara-panjakana. Ny daroka baomba sy ny fisamborana no nasetrin'ny Israeliana tamin'ny fakana ankeriny sy ny famonoana tanora Israeliana telo tany andafin'i Jordana nataon'ny Palestiniana izay angamba mpikambana ao amin'ny Hamas.
Tom Aharon nisioka ny faniriana ankapoben'ny Israeliana hahita ny governemanta “hamaly faty” ny fahafatesan'ireo tanora telo sy ireo tifitra balafomanga avy any Gaza :
Nahazo hafatra tao amin'ny WhatsApp amin'ny mahasaron-tahotra sy sarim-bavy an'i Bibi [anaram-bositr'i Netanyahu] aho, na dia handrava an'i Gaza izy. Misy olona sasantsasany tsy mety tony mihitsy mandrapahitan-dry zareo azy mihinana zazakely eo amin'ny fahitalavitra.
Mpikatroka elatra havia Danit Gottfriend namoaka tao amin'ny Facebook ny hafatra voarainy tao amin'ny WhatsApp vondron'ny ray amandrenin'ny mpianatra garabola fandehanan'ny zananilahy:
Vina… Gaza taloha [eo amin'ny ankavanana] | Gaza aoriana [ankavia]
revolisiona maitso – IDF Landscaping Inc.[orinasan-tontolo maitso IDF (tafika israeliana)]
Bar Heffetz, izay monina ao Nirim, manakaiky ny sisintany amin'i Gaza, namoaka tao amin'ny Facebook ny fitsikerana ny Praiminisitra, Minisitry ny vola ary ny minisitry ny toekarena (Varotra):
Tsoriko, fa na dia mampivarahontsana aza, faly aho fa nipoaka tamin'ny tavan'ity governemanta ity izany. Mendrika azy ireo iny – azy rehetra: [Naftali] “shrapnel in the butt“(poti-bala mipatitaka ao am-pitombenana) Bennet, [Yair] “tsy elatra havia akory aho” Lapid, ary Atoa Iran, Netanyahu. Tokony hitranga amin-dry zareo izany fa tsy amin'ny mpandimby. Satria mendrika ho an'ireo mipetraka antampon'ny volokano izany nefa tsy miraharaha azy. Mahamenatra fa isika no iharany.
Gilli Paran nisioka:
Ie, farafaharatsiny mba azo lazaina hoe inona ny nampiasan'i Gaza ny vola nomen'ny ekipam-pirenena Alzeriana azy ireo amin'ireto balafomanga ireto.
Nisioka ilay Israeliana mpiserasera Lior Oren:
Fiaran-dalamby eto Israely mandeha izao takariva izao: fanafihana amin'ny balafomanga ataon'ireo olon-dia any Gaza.
Maro ny Israeliana namazivazy tamin'ny anaran'ny bemidina, izay antsoina amin'ny teny hebreo hoe “Vato matanjaka”. Ny anarana amin'ny teny anglisy ampiasain'ny IDF (tafika israeliana) dia “Protective Edge” (Sisiny fiarovana).
Nisioka ilay Israeliana mpanao tantara vilana hampihomehezana manana anaram-bositra “Avgad Yavor”:
Manolo-kevitra aho hampitsahatra ny teny fampitoniana voambolana manafintohina [euphemisme] ary hiantso ny bemidina ataon'ny IDF manaraka ho “Bemidina Filahiana Ngeza”
Nisioka i Nitay Peretz, izay monina akaiky ny sisintanin'i Gaza :
Nanambara i Ben & Jerry's fa hamoaka tsiron-gilasy vaovao ry zareo izay hantsoina hoe “Vato Matanjaka izay hahenoana tsirona vanilla-voanjo-fandrisiham-pirenena.
Nananihany ny mpisioka Ouriel Daskal :
manana anarana amin'ny bemidina any Gaza aho! Operation déjà vu (bemidina efa hita)
Ny mpiserasera @dkapuchino namoaka ny heviny amin'izay tena tanjon'ny bemidina :
”Vato Matanjaka” satria tianay hohadinoinareo ny raharahan-kolikoly manafintohina ary tianay ny hitsaharanareo misalasala [amin'ny filàna fampakarana] ny teti-bolan'ny fiarovana tsy nandaitra na dia amin'ny fampahalalam-baovao iraisampirenena aza.
Niady hevitra antserasera amin'ny tanjon'ny bemidina ny Israeliana.
Israeliana mpanao matoandahatsoratra Ariana Melamed nanoratra tao amin'ny pejiny Facebook:
Manahy aho rehefa ny praiminisitra voatohitra eo amin'ny lafiny politika no mandefa tafika manao bemidina fanao isam-potoana izay mifarana mialoha lavitra ny tanjona manjavozavo.
Ouriel Daskal nisioka tsonga avy ao amin'ny pejy Facebook an'ilay ankavanana firona minisitry ny fitaterana Katz ary naneho hevitra:
Israel Katz: “Izay izany! Tapitra ny politikam-pitandremana! Manomboka ny Bemidina ‘Vato Matanjaka’. Ankehitriny tafavondrona isika rehetra mandra-pahatonga ny fandresena.” Fandresena rehefa miara-manao sonia amin'ny Hamas isika fa hilamina izy mandra-pahatonga ny fahavaratra 2015, izay?
“Avgad Yavor” nisioka:
Misy zavatra iray ilaina anontanian'ny mpanoratra gazety amin'ny governemanta amin'izao fotoana izao: “Misy mari-pandrefesana ahafahana mamantatra ve hoe rehefa tratra io marika io dia tapitra ny bemidina?”
Nisioka ny blaogera fironana havia Noama, izay vao nofotoran'ny Shin Bet noho ny fanadihadiany ny fampijaliana ankizy any am-pitazonana olona vonjimaika:
Miteny daholo fa heloka an'ady ny mitifitra amin'ny sivily, fa tsy misy mahita sivily ny andaniny sy ny ankilany